Xaaf muxuu ka yiri go’aanka Maxkamadda Sare ee Galmudug ? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xaaf muxuu ka yiri go’aanka Maxkamadda Sare ee Galmudug ?
Xaaf muxuu ka yiri go’aanka Maxkamadda Sare ee Galmudug ?
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa ka hadlay go’aankii Maxkamadda Sare ee maamulka Galmudug ay ku sheegtay in sharci ay yihiin dhammaan go’aanadii xildhibaanada Baarlamaanka ay xilka uga qaadeen Madaxda Galmudug.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee maamulka Galmudug Yaxye Sheekh Cali oo maanta magaalada Cadaado kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay go’aankii 26-kii September xildhibaanada Galmudug ay xilka uga qaadeen Madaxweyne Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) in uu yahay mid sharci ah.
Sidoo kale wuxuu sheegay in iyana ay sharci tahay go’aankii xildhibaanada Galmudug 30-kii September ay xilkii uga qaadeen Madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casir.
Madaxweyne (Xaaf) oo arrintaasi ka jawaabayay lana hadlay warbaahinta gudaha ee Galmudug ayaa sheegay in Galmudug aysan laheyn wax Maxkamad Sare ah islamarkaana Qoraalka ka soo baxay Xafiiska Guddoomiyaha Maxkamada uu yahay mid aan waxba ka jirin.
Sidoo kale Madaxweyne (Xaaf) waxa uu sheegay in Galmudug aysan waligeed yeelan Maxkamad, hase ahaatee qoraalka Maxkamada uu yahay mid aan wax ka soo qaad laheyn.
27-kii September ee sanadkan Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa amar ku bixiyay in dib loo howlgeliyo Maxkamadda sare ee maamulkaasi, taasi oo hada cadeyneysa in uu isburinayo hadalka (Xaaf).
Xaaf ayaa ujeedka loo howlgelinayo Maxkamadda xilligaasi ku sheegay in ay tahay si ay u gudato waajibkeeda Dastuuriga, oo aanay cidna uga heybeysan shaqooyinka horyaalla, xaaladaha lagu jirana aanay indhaha ka laaban.